Guusha sheekada LLC "Razdolye" (Gobolka Moscow) - Magazine "Nidaamka Baradhada"
Shirkadda "Razdolye" LLC waxaa la aasaasay 2008, laakiin waxay heshay wareeg cusub oo horumarineed sanadkii 2015
sanadka imaatinkiisa koox dhalinyaro ah oo horumarineed.
Suuqa beeraha ayaa la falanqeeyay istiraatiijiyad horumarineed oo wanaagsan oo shirkaddu u leedahay gobolkan ayaa la sameeyay, iyadoo la tixgelinayo carrada iyo xaaladaha cimilada. Ilaa maanta, mudnaanta waxaa la siinayaa saddex qaybood: baradhada oo la beero; soo iibsiga calafka xoolaha (hay, caws) iyo hadhuudh sii kordhaya. Shirkaddu waxay leedahay saddex qaybood oo kala duwan oo ku yaal gobolka Moscow - Istra iyo Dmitrovskoye, oo soo saarta quudinta, iyo Klinskoye, oo ku takhasusay kobcinta baradhada. Qeybta dambe waxay ku taal meel u dhow keydka dabiiciga ee Zavidovo. Sidaa awgeed magaca sumadeena - "baradhada Zavidovsky".
Shirkadeenu waxay fulisaa meerto buuxda oo wax soo saar ah oo ku saabsan koritaanka, farsamaynta, keydinta iyo iibinta wax soo saarka beeraha, taas oo noo oggolaaneysa inaan xakameyno tayada dhammaan silsiladda wax soo saarka oo dhan - laga bilaabo berrinka illaa iyo macaamilka ugu dambeeya. Hadda beerta waxay leedahay in kabadan 10,5 kun oo hektar oo dhul ah, kororka waxsoosaarka guud ee sanadka 2020 ayaa gaaraya in kabadan 70%. Shirkaddu waxay leedahay degel rasmi ah www.ecorazdolie.com iyo koontada Instagram @eco_razdolie
Shirkaddu waxay shaqaaleysiisaa 45 qof, marka lagu daro, ilaa 20 qof ayaa ka shaqeeya inta lagu jiro xilliga qandaraaska. Shirkaddu hadda waxay ku jirtaa marxaladda horumarinta firfircoon iyo koritaanka, sidaa darteed, sannadka 2020, tirada shaqaalaha waxay kordhisay 45%.
Hadda waxaan ka shaqeeynay tikniyoolajiyadda baradhada kobcaysa waxaanan keennay aagga beeritaanka 250 hektar sanadkan, sanadka soo socdana waxaan qorsheyneynaa inaan ku kordhinno ku dhowaad 350 hektar. Intaa waxaa dheer, laga bilaabo 2021 waxaan qorsheyneynaa inaan soo bandhigno xididdo iyo karootada wax soo saar.
Noocyo kala duwan inta lagu jiro xilliga koritaanka waxay leeyihiin shuruudo kala duwan oo loogu talagalay xaaladaha deegaanka, waxa ku jira nafaqooyinka ku jira ciidda iyo nafaqada macdanta. Sidaa darteed, beero kasta oo ka mid ah soo saarista wax soo saarka beeraha, sida caadiga ah, waxay ka baxaan ugu yaraan laba nooc oo isku dalag ah. Beerteenna, waxaan dhaqan ahaan ku beeri jirnay noocyo baradho ah sida Gala iyo Red Scarlett. Intaa waxaa dheer, qayb ka mid ah aagga sannadkan waxaa degay beeritaanka Vega iyo Merlot baradhada.
Kuwii ka horreeyay ee baradhada, waxaan u yeelan karnaa mustard sida digada cagaaran ama qamadiga.
Baradhadu waxaa lagu gooyaa kuwa soo jaraya baradhada casriga ah Grimme SE 260. Tayada farsamadan waxay la kulantay dhamaan wixii aan ka filaynay, waxay si buuxda u buuxinaysaa dhammaan shuruudaha lagama maarmaanka ah.
Haysashada kayd tayo leh waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu guuleysto iyo faa'iidada laga helo ganacsiga. Qiimaha iibinta baradhada "xilliga sare", oo soconaya Diisambar illaa Maajo, way ka badnaan kartaa 2-2,5 jeer qiimaha inta lagu guda jiro goynta.
Waxaan haynaa mashruuc balaaran oo loogu talagalay dhismaha shan bakhaar oo khudaar casri ah, iminkana shirkaddu waxay dhistay xarun casri ah oo nooca hangar-ka ah (frameless) oo lagu keydiyo 7 kun tan oo baradho leh kanaallo hawo hawo ah. Sannadka soo socda, xarun kale oo keyd ah oo isku mid ah oo qaadi karta 3,5 kun tan ayaa la howlgelin doonaa.
Kahor intaadan keydin baradhada si aad u keydiso, keydinta baradhada waa la nadiifiyaa, la qalajiyaa, jeermis lagu dilaa waana laga daweeyaa cudurada iyo cayayaanka. Qalabka hawo isticmaalida iyo qalabka keydinta ayaa sidoo kale jeermis lagu dilaa. Tani waa geedi socod muhiim ah waana aasaaska yareynta qasaaraha keydinta.
Sannadkii 2017, shirkaddu waxay markii ugu horreysay bilowday inay baradho siiso 13 dukaanno oo Myasnov ah oo ku kala yaal magaalooyinka Moscow iyo Nizhny Novgorod. Waqtigan xaadirka ah waxaan sidoo kale siinaa baradhadayada shabakada VkusVill. Intaa waxaa dheer, wadahadalo ayaa socda oo ku saabsan iskaashiga suurtagalka ah ee silsiladaha "Victoria", "Azbuka Vkusa", "Globus Gourmet". Waxaan sidoo kale wax ka qabannaa ganacsiga jumlada yar yar ee wax soo saarka. Dhamaan baradhada ku baxda beeraheena waxay u hogaansamaan GOST.
Waxaan sii wadi doonnaa hirgelinta mashruuca dhismaha xarun kayd ah oo lagu kaydiyo khudaarta si loo keeno wadarta kaydintooda 17,5 kun tan. Waxaan horumarin doonnaa astaanteena gaarka ah ee baradhada bey'ada "Zavidovsky". Mustaqbalka, waxaan qorsheyneynaa inaan furno dukaan lagu farsameeyo wax soo saarka khudradda. Marka la eego soo iibsiga xoolaha, waxaa jira hadaf - in la qabto booska hoggaamineed ee gobolka Moscow lana gaaro mugga iibka qiyaastii 4 tan sanadkii.
Waqtigaan la joogo, beeraha badankood waxay dhibaato ku qabaan shaqaalaha. Waxay sidoo kale quseysaa shirkadeena: waxaa jira yaraanta khabiiro takhasus u leh cilmiga beeraha iyo wadayaasha cagafyada dhamaan fasalada, gaar ahaan kuwa khibrada u leh qalabka shisheeye ee casriga ah.
Tags: Baradho Zavidovsky"Joogsi"baradho korayagobolka Moscow
Seeds leh nasab wanaagsan. Sida looga fogaado xumaanshaha baradhada oo loo helo goosasho hodan ah